Google ga-ajụ ndị ọrụ gam akporo ka ha họrọ ihe nchọgharị | Gam akporosis
Nke a bụ otu esi atụ aro ndị ọrụ gam akporo ịhọrọ ihe nchọgharị
Izu ole na ole gara aga, a kwadoro na Google ga-enwerịrị gakwuru ndị ọrụ gam akporo na Europe banyere ihe nchọgharị ahụ ha chọrọ iji na ekwentị ha. Ihe na - ebilite mgbe nsogbu ụlọ ọrụ ahụ nwere na European Commission, nke nyere ha ezigbo ego. Ya mere, Google kwadoro na ha ga-eme ya jụọ ndị ọrụ nke a n'ihe gbasara izu. Ihe dịlarị njikere ịga.
N'okwu a, A ga-eji Google Play gwa ndị ọrụ na gam akporo. A ga-egosipụta ndepụta nke ihe nchọgharị ndị ọzọ, na mgbakwunye na Google Chrome. Ya mere na ndị ọrụ chọrọ, nwere ike iji onye ọzọ na ama ha, mana chọrọ iji Google n'ọnọdụ ha.
N'ụzọ dị otú a, mgbe onye ọrụ meghere Storelọ Ahịa Play maka oge mbụ, ị ga-abịa na usoro nke ịnabata meziri. Na otu n'ime ndị mbụ, a ga-egosi windo a nke a na-egosi ihe nchọgharị ndị dịnụ. Na mgbakwunye na engines ọchụchọ nke enwere ike iji na gam akporo. Ya mere, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịhọrọ ihe ọ chọrọ.
A na-egosi usoro nke ngwa ndị a na ndepụta ndị a, ise na mkpokọta, na mgbakwunye na ndị nke anyị tinyegoro. Dị ka e kwuru si Google, ndepụta ga-egosiputa na-adabere na ewu ewu na usoro aghara. Yabụ na ọ nweghị onye ọ bụla nke a metụtara.
Site na usoro ohuru a, Google nwere olile anya soro nke ọma na arịrịọ nke European Commission. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, a ga-etinye usoro ọhụrụ a n'ime izu ndị na-abịanụ. Ọ bụ ezie na ha enyebeghị ụbọchị akọwapụtara maka ya na gam akporo, mana ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya, dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo.
Obi abụọ adịghị ya, otu nzọụkwụ ọzọ na mmekọrịta dị mgbagwoju anya nke Google na European Commission, mana nke a bụ otu n'ime usoro ndị a gwara ụlọ ọrụ ka ha mee. Ya mere, Ndị ọrụ gam akporo ga-enwe ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ihe nchọgharị ọzọ ma ọ bụ njin ọchụchọ na ekwentị ha. You ga-agbanwe ihe nchọgharị na igwe nchọta ihe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nke a bụ otu esi atụ aro ndị ọrụ gam akporo ịhọrọ ihe nchọgharị
Edere ọnụahịa nke OPPO Reno na Europe